Triveni Online - Page 386 of 432 - News of Nepal
यहाँ हेर्नुहोस ! भगवान् बुद्धका १० विपत्तिहरु के के हुन ?
September 1, 2018	Dharma 0
बुद्धको नाम लिनेबित्तिकै सर्वसाधारणको मनमा शान्ति र सदाचारको सूर्य उदाउँछ । तर, उनी निरपेक्ष शान्तिका पक्षधर थिएनन् । शान्तिको मन्त्र जप्दैमा त्यो त्यसै आउने कुरा होइन । शान्ति ल्याउनु छ भने अन्याय हटाउनुु अनिवार्य छ । ‘जहाँ अन्याय छ, त्यहाँ छायाले जस्तै अशान्तिले पछ्याउँछ,’ उनी भन्थे, ‘अन्यायमा शान्तिको खोजी त्यतिकै …
September 1, 2018	Rochak 0
काठमाडौँ । एकताका मेरी बास्सैमा निकै लोकप्रिय बनेका दुई पात्रहरु मुस्कान पासा र फतौरी बुढीको एक गाईजात्रे भिडियो सार्बजनिक भएको छ। मेरी बास्सैमा निकै लोकप्रिय बनेको जोडी अरु कोही नभएर रियल तथा रिल जोडी चर्चित हाँस्य कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तली हुन्। उनीहरुको एउटा अभिनय हो यो …
१। कम्तिमा सात घन्टा सुतौँ हरेक रात कम्तिमा सात घन्टा सुतौँ । कडा परिश्रम छ भने आठ घन्टा सुत्न सकिन्छ । निद्रा बिग्रिएमा शरीर चल्ने प्रक्रियामा गडबड हुन्छ र मधुमेहले सताउने सम्भावना बढ्छ । निद्रा नपुग्दा धमनीमा क्याल्सियम जम्मा हुने खतरा रहन्छ, जसले धमनी खुम्चिन सक्छ २। आफ्नो रक्तचाप जानी …
तपाई तीन भण्टाभन्दा बढी समय कम्प्युटरमा बिताउनु हुन्छ ? यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस्, नत्र…
कम्प्युटर अहिले हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । जीवनका हरेक क्षेत्रमा कम्प्युटरको महत्वलाई नकार्न सकिँदैन तर लगातार कम्प्युटरको अगाडि बस्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । एक नयाँ अध्ययन अनुसार दिनमा लगातार तीन घण्टा कम्प्युटर चलाउनाले आँखाको समस्या देखा पर्दछ । जोन रिटानो अमेरिकाको एक कलेजमा इतिहासका प्राध्यापक हुन् । …
तपाई जिबनमा सफलता चाहनुहुन्छ भने विहान उठेर यी कामहरु गर्नुहोस्
हरेक काम १०० सय प्रतिशतमा गर्नुहोस् ताकि भोलि फर्केर त्यही कामका लागि सोच्न नपरोस् । रोग लाग्न दिएर उपचार गराउनु भन्दा रोग लाग्नै नदिने उपायको खोजी नै सर्वोत्तम उपाय हो । राम्रो काम गर्नुस् राम्रो स्थानले आफै खोज्दै आउँछ । तपाई जिबनमा सफलता चाहनुहुन्छ भने विहान उठेर यी कामहरु गर्नुहोस् …
शनिबार यी खानेकुरा किन खानु हुन्न ? खाएमा के हुन्छ ?
शनिदेवलाई खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ बने शनिबार खाने कुरामा सावधानी अपनाउनुपर्छ । धर्मशास्त्रको अनुसार शनिबार यी खानेकुरा खाँदा शनि बेखुसी हुने बताइन्छ । के-के हुन ती खानेकुरा जुन शनिबार नखाँदा नै बेस हुन्छ । १. सादा दुध वा दहिको सेवन शनिबार राम्रो मानिदैन। तर दुधमा मह वा चिनी मिसाएर भने खान …
हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो अंग छाला हो । शरीरको रक्त प्रणालीले छालामा प्रयोग हुने सबै चिजलाई सोस्दछ । छालामा प्रयोग गरिने सौन्दर्य प्रशाधनमा पनि विभिन्न किसिमका रसायनहरुको प्रयोग गरिएको हुन्छ । जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्न सक्दछ । यसका साथै छालाको क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग पनि लाग्न सक्ने हुन्छ …
यो संसार प्रकृतिको देन हो र प्राकृतिक नियमसंगत चल्छ । खाद्यवस्तु पनि प्रकृतिले मानव समुदायलाई दिएको उपहार हो । यसमा सबै जीवजन्तुको अधिकार हुन्छ । तर हरेक वस्तुमा पेटेन्ट अधिकार लिन खोज्ने व्यापारिक कम्पनीले बिरुवामा पनि पेटेन्ट अधिकार पाउने प्रयासस्वरूप हाइब्रिड÷अणुवंश परिवर्तन गरिएका बिरुवा वा खाद्यवस्तु विकास गरेका छन् । …
हामी किन मन्दिर जाने ? हेर्नुस मन्दिर जानुको १० वैज्ञानिक कारण
नेपाल हिन्दु परम्परा र संस्कृतिले धनी देश हो। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका मात्रै सैयौँ महत्वपूर्ण मन्दिरहरू अवस्थित छन्। साथै विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने ७ वटा धर्मस्थलहरू पनि काठमाडौँमै छन्। उपत्यका बाहिर अन्य जिल्लाहरूमा पनि यस्ता हजारौँ मठ-मन्दिरहरू छन्, जसले नेपालको प्राचीन इतिहास र संस्कृति झल्काउँदछन्। यहाँका हिन्दु मन्दिरको मूख्य विशेषता यसको …
मानिसलाई धन लाभ हुने २० वटा संकेतहरु : के के छन् जानिराखाैं !
हिन्दु धर्ममा शुभ र अशुभको पुरानो मान्यता अझैपनि जिवितै छ । विभिन्न संकेतका आधारमा शुभ र अशुभका बारेमा जान्न सकिन्छ । त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त …
Page 386 of 432« First...360370380«384385386387388	»	390400410...Last »